Izany no ilàna ny 4GB an'ny RAM tao amin'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
ny fahatsiarovana Ny RAM dia iray amin'ireo sehatra notsikeraina indrindra amin'ny fitaovan'ny orinasa paoma. Ny valiny nomena nandritra ireo taona maro momba ny tsy fahampiana raha miresaka momba ny RAM amin'ny iPhones na iPad dia tsy nila an'izany tsotra izao izy ireo. Io iOS io dia rafitra namboarina be loatra ka afaka nihazakazaka moramora tsy mila fanatsarana lehibe amin'ity lafiny ity.
Na izany aza, ny filàna fanovana amin'ity lafiny ity dia efa maika, amin'ny fijerena ny fitakian'ny tsena. Miaraka amin'ireo fitaovana vaovao natombok'i Cupertino teny an-tsena tato anatin'izay volana vitsivitsy izay dia afaka nahita ny fomba niovan'ny fomba fijery isika, fampitomboana ny fahatsiarovana RAM an'ny iPads sy iPhones.
Na amin'ny sasany na amin'ny hafa, ny fanovana dia zavatra nilaina. Ny RAM 2GB ao amin'ny iPhone dia zavatra efa nandrasana hatry ny ela ary, ankehitriny ananantsika izy ireo dia tsapantsika fa Ny ankamaroan'ny asa izay ataontsika isan'andro amin'ny finday avo lenta dia azo tanterahina amin'ny fomba tsara kokoa misaotra an'io. Ny fahasamihafana sasany izay tena tsikaritra rehefa mizaha ao amin'ny Safari ary mifamadika amin'ireo takelaka samihafa, ohatra, izay tsy anaovana fitsipika toy ny taloha intsony ny famerenana azy ireo.
Ny iPad Pro dia namely fotsiny ny tsena tamin'ny fampanantenany hanolotra anay terminal tsy misy marimaritra iraisana rehefa mametraka azy eo alohan'ny solosaina finday ho an'ny asa tsotra, noho izany tsy azonao atao ny miala amin'ny herinaratra. Ao amin'ny lahatsarin'i iDownload Blog hitantsika tetsy ambony dia hitantsika ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny iPad Pro sy ny iPad Air 2 (4GB vs. 2GB of RAM), mampiseho aminay ny fomba ahitan'ny vokatra vaovao an'i Apple ny fitaovana tsara indrindra hitetezana tranonkala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny RAM 4GB ao amin'ny iPad Pro dia nilaina tamin'ity [video] ity
Apple Watch dia hanana charger ofisialy vaovao (Sary)